Midowga Musharaxiinta oo ku baaqay Bannaanbax | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Musharaxiinta oo ku baaqay Bannaanbax
Golaha Midowga musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya 2021 ayaa ku baaqay Bannaanbax weyn oo ay dadka shacabka ah ka codsadeen in ay kala soo qeyb galaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha ay ku mideysan yihiin midowga musharaxiinta ayaa ku dhawaaqay in Muqdisho lagu qabanayo Banaanbax weyn oo nabadeed, isla markaana lagu dalbanayo in la qabto doorasho heshiis lagu yahay, kaasi oo dhici doona maalinta Jimcada soo socota kuna beegan 21 Febaraayo 2021, iyagoona shacabka ugu baaqay inay isu soo baxaan, kana soo qeyb galaan banaanbaxa.
Golaha ay ku mideysan yihiin musharaxiinta ayaa dhowr jeer oo hore ku baaqay bannaanbax lamida midka ay hadda iclaamiyeen, kaasoo lagu muuujinayo in laga soo horjeedo muddo kororsiga dadban ee madaxweyne Farmaajo oo muddo xileedkiisii ka dhammaaday, isagoo aan hortagin Golaha Shacabka iyo kan Aqalka sare kana codsan in muddada loo kordhiyo, arrintaasi oo ay diideen xildhibaanada mucaaradka iyo Xubnaha beesha caalamka oo si aada uga soo hor jeestay muddo kordhinta.
Guddoomiyaha midowga Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay waxyaabaha uu ku guul darreystay madaxweyne Farmaajo, waxa uuna sheegay in madxweynuhu uu ku guul darreystay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah, sidoo kalena wuxuu sheegay in uu ku guul darreystay in uu isku soo dhaweeyo aragtiyada kala duwan ee isaga iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.
Waxa uu ku celceliyay in madaxweynuhu waqtigiisii dhammaaday, muddo lix cisho ahna uu si sharci darro ah ku fadhiyo xafiiska ugu sarreeya Villa Somalia.